Yenza Impendulo Yemibuzo Yemibuzo
Ngaba ufuna ukuqonda ukuqonda kwakho kokufunda? Ukusebenzisa izakhono zakho zokungena kwiindawo ezifanelekileyo ukuqala, kodwa ukuba awuqinisekanga ukuba ungayenza njani inqaku (nokuba yeyiphi na enye), unokufuna ukuqala ngeendlela ezisemgangathweni eziza kukunika zonke iinkcukacha udinga. Ukuba ulungele ukuya, qhubela phambili kwaye uqalise kunye nale mibuzo elula yokubhala imibuzo ukuze ufunde izakhono zakho zokufunda .
Imibuzo elandelayo yokunika ingcaciso inikezela uvavanyo oluyisiseko lokuqonda kwakho isakhono.
I-PDF eprintiweyo: Impendulo yokuSebenza Imibuzo 1 | Iimpendulo zokuthintela Imibuzo yemibuzo 1
Imibuzo yokuSebenza Imibuzo 1
Ukusebenzisa amaqhinga akho amanani angabonakaliyo, yenza inkcazo malunga neengxelo ezilandelayo. Ezimbini zokuqala zenzelwe wena.
Andiyi kuyidla emva kokuba eneminyaka emibini ubudala ukuba ndibe nguwe.
Impendulo : Umntwana oneminyaka emibili mhlawumbi wenza into ebalulekileyo ekutya okukude uyidle okanye unobanda kwaye ungayibamba. Into embi iya kwenzeka kuwe xa udla ukutya.
NgoSuku lweValentine , ummelwane wam onomdla wanika umfazi wakhe imbongo eyamthatha malunga nemizuzwana emibili ukubhala. Sheesh.
Ukuphazamiseka: Ummelwane wam akaxhomekanga kakhulu kuba engazange athathe ixesha lokubhala imbongo.
Umntu wagijima emva kwebhasi yokufuduka, ekhupha isikhwama sakhe.
Ukuba wafa , andiyi kumngcwabo wakhe.
UJake wayefuna ukuba akazange aphulaphule umsakazo. Waya ekamelweni waza wambamba isambulela sakhe nangona wayeziva ephosakeleyo ephethe i-bhasi yokuhamba ngaloo ntsasa.
Hayi! Yintoni eyenzekayo kuyo yonke imali yokwakha yesikolo ithathwe kubahlawuli berhafu? Yayihlawulela le yangasese imali yachithwa.
Njengoko unikela intetho phambi kwabaphulaphuli abaninzi, uyaqaphela ukuba abantu bahleka emva kwezandla zabo kwaye babhekisela kwingingqi engaphantsi kwelinqeni.
Hayi, Hayi, andifuni ukuba uchithe imali eninzi kumhla wokuzalwa wam. Ukuba nje ube nomyeni kuphela isipho esiyidingayo. Enyanisweni, ndiza kuqhuba ibhakethi lam elidala elinamabhodlela phantsi kwintengiso kwaye ndizithengise isipho esincinane. Yaye ukuba imoto engasweleyo idala, ndiza kubuyela emva kwangoko.
Ibhinqa liya esibhedlele lithintela isisu sayo kwaye likhwaza umyeni wayo, ohamba emva kwakhe ethwele isikhwama esikhulu.
Uqhuba umgwaqo omkhulu, ulalele kwirediyo, kwaye igosa lombutho likukhupha.
I-Inference Practice 1 Iimpendulo eziphakanyisiweyo
3. Indoda yagijima emva kwebhasi yokufuduka, ikhupha isikhwama sayo.
Impendulo : Le ndoda yayifanele ithathe ibhasi ukuba isebenze kwaye wayesebenza ngokukhawuleza. Ufuna umqhubi webhasi ukuba ayeke ibhasi ukuze afike kuyo.
4. Ukuba wafa, andiyi kumngcwabo wakhe.
Ukuphazamiseka: Ndithukuthelele kakhulu lo mfazi ngenxa yesizathu esona sizathu, kuba enye yezinto ezimbi kakhulu umntu angayenza kukunyanya umntu emva kokudlula.
5. U-Jake wayefuna ukuba akazange aphulaphule umsakazo.
Waya ekamelweni waza wambamba isambulela sakhe nangona wayeziva ephosakeleyo ephethe i-bhasi yokuhamba ngaloo ntsasa.
I-Inference: UJake weva ukuba kwakuza kuvula imvula kamva.
6. Hayi! Yintoni eyenzekayo kuyo yonke imali yokwakha yesikolo ithathwe kubahlawuli berhafu? Yayihlawulela le yangasese imali yachithwa.
I-Inference: Isithili sesikolo sichitha imali yomhlawuli werhafu.
7. Njengoko unikela intetho phambi kwabaphulaphuli abaninzi, uyaqaphela ukuba abantu bahleka emva kwezandla zabo kwaye bebhekiselele kwingingqi engaphantsi kwelinqeni.
Ukuphazamiseka: Ukhohliwe ukupaka i-fly yakho okanye unento ethile kwibhulukhwe zakho.
8. Hayi, Hayi, andifuni ukuba uchithe imali eninzi kumhla wokuzalwa wam. Ukuba nje ube nomyeni kuphela isipho esiyidingayo. Enyanisweni, ndiza kuqhuba ibhakethi lam elidala elinamabhodlela phantsi kwintengiso kwaye ndizithengise isipho esincinane.
Yaye ukuba imoto engasweleyo idala, ndiza kubuyela emva kwangoko.
Impendulo : Umfazi ufuna indoda ingathenge imoto entsha yokuzalwa kwayo.
9. Ibhinqa liya esibhedlele lithinta isisu sayo kwaye liqalekisa indoda yakhe, ehamba emva kwayo ethwele isikhwama esikhulu.
Ukuphazamiseka: Umfazi usebenza.
10. Uqhuba ngomgwaqo omkhulu, ulalele kwirediyo, kwaye igosa lombutho likukhupha.
I-Inference: Uphule umthetho ngandlela-thile xa uqhuba.
Imizekelo yePetrochemicals kunye neMveliso yePetroleum
Ukhetho oluLawulayo kwi-Biology Evolutionary
Imibuzo engama-20: I-Quiz kwi-AP Stylebook (2015)